Vao haingana ny fivarotam-bolan'ny Surgical antsika. Ny Gg amin'ny Surgical Gowns dia amidy amin'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Afa-po amin'ny mpanjifa sy ny serivisy avy amin'ny ekipan'ny varotra varotra izahay. Sterilization: sterile fampiharana: Azo ampiasaina amin'ny fandidiana sy ny fitsaboana ny marary.Inspec ...
Farany vao haingana ny fivarotana itony azo itokisana. Ny volomaintsika mitokana dia amidy any amin'ny firenena maro maneran-tany. Afa-po amin'ny mpanjifa sy ny serivisy avy amin'ny ekipan'ny varotra varotra izahay. Vokatra: Zavamaniry mitokana azo alaina A: Fitaovana / atiny: 100% polypropylene tsy voatsara ...
Vao haingana ny fitafiantsika fiarovana miaro tena azo amidy. Ny kitapo fiarovana arosontsika dia amidy any amin'ny firenena maro toa an'i UK, Japan, Canada, Malaysia sns. Ireo mpanjifa dia tena afa-po amin'ny kalitao vokarintsika sy ny serivisy omen'ny varotra. ...
Vao haingana ny fivarotantsika aprons dia fivarotana mafana. Nanome ny mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay. Afa-po amin'ny mpanjifa sy ny serivisy avy amin'ny ekipan'ny varotra varotra izahay. Ny apron azo ampiasaina dia manana ireto ambany ireto: 1) anti-rano, anti-menaka, anti-vovoka, fampiasana betsaka amin'ny sehatra isan-karazany ....
Ny kapoakan'ny fanadinana IgM / IgG eto amintsika dia amidy mafana. Nanome ny mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay. Afa-po amin'ny mpanjifa sy ny serivisy avy amin'ny ekipan'ny varotra varotra izahay. Ny orinasa eto aminay dia manana hery ara-teknika matanjaka. Aretina Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Test dia haingana, qualitati ...
Vao tsy ela akory izay dia namidy amam-bika amina endrika 800,000pcs ny orinasanay. Ny mpanjifa dia tena afa-po amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisinay. Ny firafitry ny tavanay dia manana toetrany ambany: 1. Ity vokatra ity dia mampiasa PET marika avo ho an'ny fitokanana sy ny fiarovana amin'ny endrika rehetra. 2. Ny vokatra dia maivana ao ...
Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Fiakanjo fiarovana, Fiakanjo fiarovana, Akanjo fitsaboana fitsaboana, Water-Proof Apron, Rano Hdpe aprily amin'ny rano,